Nzvimbo-Nguva Yakaoma Inoyerera Nesimba Rine Simba | Tikai Interior Design | WOWOW Faucets-WOWOW Faucets
musha / Interior design / Iyo Space-Nguva Yakaomarara Inoyerera Nesimba Simba | Tikai Yemukati Dhizaini
2021 / 05 / 28 kupatsanuraInterior design 7308 0
DINZ Yemukati Dhizaini Mubatanidzwa
Nhetembo dzeChinese ndedze "rhyming", uye mazwi akanakisa ari muchiito. Sezvo chirevo chichienda, "Nzvimbo diki kwazvo inoratidza pfungwa hombe". Isu tinotarisa pane kufarira kwe "zvinoita kunge kunofamba uye kwakanyarara" mundima dzenzvimbo, kuti titore kuyerera kwechisikigo nhetembo pamwe nemasimba enguva.
Nguva, senzvimbo, chikamu chekuvapo. Nguva iri kufamba uye nzvimbo ine hudzamu. Nekuwedzera zvakafanira masimba ekugadzira zvinhu, kuratidzwa kwenzvimbo kunopihwa zvinoreva nguva. Space saka iine imwe yekuwedzera - iyo kunzwa kwenzvimbo pasi penguva shanduko.
Kubva pane mwenje nemumvuri, magadzirirwo, chimiro uye ruvara, nguva dzakasimba dzekuyerera pakunamata dzinodudzirwa sekunaka kwekubatanidzwa kwekufamba uye kunyarara munzvimbo yepasi rose. Runako rune simba runesimba harungopi chete nzvimbo nzvimbo yakasarudzika yekurangarira, asi zvakare inosimbisa dhizaini dhizaini yenyaya iyi, ichibvumira muyero pakati peunyanzvi nekutengesa kukosha
Sekuratidzwa kwezvinhu, zvinhu zvinogona kuburitswazve mundangariro dzemunhu, inova ndangariro. Inogona zvakare kufamba, kuchinja, kurongazve uye kunyangwe kugadzira mundangariro dzemunhu, kunova kufungidzira. Mamiriro ezvinhu chaiwo echokwadi uye mamiriro ekufungidzira ekurangarira. Kana zviitiko zviviri zvaputswa, kubva kune mashoma kusvika kune asingagumi, iyo nzvimbo inotakurawo tsoka dzayo uye nyaya dzenguva.
Area Nhaurirano Nharaunda
Iwo hunyanzvi hwakavanzika, asi chirevo chakadzika. Iyo yekutanga kune inoitika mutsara weakaremara uye akakotamiswa antique emhangura-ane mavara machubhu machubhu. Izvo zvezvakaitika uye zvemazuva ano zvakaputswa uye zvakavakwazve pano, zvine pfungwa dzemusiki pane yekumabvazuva aesthetics.
Iyo mantle-kunge pombi dzemhangura dzakapindirwa nemasimbi esimbi, ayo ese ari maviri echinyakare mune echinyakare uye azvino mukupesana. Mamorekuru emakristuru anoyerera mumhepo anotenderera nemhepo, uye zvisingaonekwi zvinoonekwa muchiedza chinoyangarara.
▲ Chirevo Art Kuisirwa
Semuenzaniso, kumaChinese ekare, matavi akadonha emuti anoratidza kunaya. Ruvara rusingabvumike, mutsetse, chimiro, muviri uye kurira, uye nguva yekufananidzira, nzvimbo, vanhu, zvinhu uye zvinoyevedza zvakasanganiswa pamwe chete kuti vawane mutinhimira wenguva pfupi uye kunyange mutinhimira wepfungwa wenzvimbo.
Nzvimbo yega yega ine manzwiro ayo ekuburitsa, uye zvakare ine yayo nyaya yekutaura.
Fuqing, nemakomo uye gungwa, ndiko kusikwa kwehunyanzvi hwekufamba uye kunyarara. Dhizaini yeprojekti inoenderana nenzvimbo ino, uye pfungwa ye "kufamba" inoshandiswa kugadzira nzvimbo ina-mativi munzvimbo yemaguta, iyo yakavharirwa kune yakasarudzika fomu. Iyo purojekiti iri kubva mukati nekunze, uye kubva kunze mukati, ichigadzira yayo yehupenyu hupenyu iyo inogarisa marudzi ese emamiriro ekunze.
▲ Mifananidzo muPromenade
Mifananidzo iri muproscenium iratidziro yemifananidzo inogadzira pfungwa yechic uye inoyerera ruzivo mukurovera kwakabatana. Iyi nhevedzano yemabasa emawumba inoumba nzvimbo yevazhe uye inotungamira vaoni kunzvimbo yekuchengetedza nzvimbo kuti vazorore nekukurukura. Pasi pemhepo inovhenekera yerima, inokurudzira vanhu kuti vafunge nenzira nyowani nerunako rwekare.
Space ine matatu-mativi, nguva ndiyo chikamu chechina, inotsvedza nguva mumakona enzvimbo yekuvakwa. Kukuya mune yakasarudzika ine simba yekushongedza, isina kuomarara, zvakare inoshandura tambo inofamba kuita rwendo rwusinganzwisisike.
Yakasimba uye ine simba, mashandiro uye fomu zvinoshandurwa pasina trace. Uye misiyano inogadzirwa nenguva, saka hauzombozive kuti ndeipi fomu nzvimbo ichagadziriswa. Chiedza chete ndicho chinodarika panogumira nzvimbo nekupararira kusvika padanho renguva.
Chiedza chinopindirana nemapoinzi, mitsara uye maficha, uye nzvimbo dzakapararira dzechiedza chenyeredzi dzinova mamorekuru akasimba zvakanyanya. Kurongeka pamwe nekubatanidzwa kwezviyero zvemwenje zvine mutsetse zvinopinda mukati memanzwiro ane mitsara yakawanda yekunyepedzera kwekunyepedzera, nzvimbo-yematanho matatu, uye rega mwenje nemumvuri zvive nehukuru uye zvechipiri. Iko kusanganiswa kwemahwindo makuru epasi-kusvika-padenga uye magirazi uye zvigadzirwa zvegirazi zvinoita kuti muganho uripakati nekunze kusanzwisisike uye kunoshamisa.
Windows Mahwindo makuru epasi-kusvika-padenga nemifananidzo
Kutsvenesa mazwi kuchenesa uye kugadzira izwi rimwe nerimwe rakashandiswa munhetembo. Uye iyo nzira yekucheka kubva kune yemuno nuance inoshandawo mukuvaka iko kuratidza kwenzvimbo. Zvakanyatso kugoverwa machena macolumn anoshanda seye indekisi yenzvimbo, ichibatanidza nzira dzakatsetseka. Iyo inki yekupenda-senge pateni inoshandawo semusikirwo kumashure kupedzisa kwenzvimbo. Iyo yakatenderera bhawa iri pakati, uye nzvimbo yekuzorora yakakamurwa mudenderedzwa yakatenderedza, ichibatanidza munda wese.
▲ Iyo yakavezwa mhango yegoridhe
Screen Transparent chidzitiro
Ink Gomo reingi
Iyo yakavezwa yegoridhe yakavezwa pakati peyakapoterera nekwere, uye mabwe emarble mumamiriro enki ink splash maitiro. Chidzitiro chakajeka, icho chakaonda kunge munhenga senge lute, chiri nyore kushandisa asi chakakodzera. Pasi pekutumirwa kwekubatanidzwa kwedenga mwenje uye mwenje, iyo system sisitimu iri kudzikisira nepfungwa yepasi yakasarudzika rhythm.
Iwo anooneka kana asingabatike ruzivo rwekushanduka kunochinja nedanho rega. Kuona kwekumisikidza kwekare uye nyowani, kubonderana kweChina neWestern. Nzvimbo yemusangano yakagadzirirwa nekuvhura kusimbisa pfungwa yenzvimbo, uye iyo hafu yekuparadzanisa isina kutaridzika kwekudzivirira inosanganisa nzvimbo dzinoverengeka. Iko kuronga kunosiyaniswa zvinoenderana akasiyana mabasa uye zvakavanzika zvinodiwa.
Sekutaura kwakaita mazwi eharahwa reHalf Pond mu "Mazwi eHyatt Regency": "Ingori yakaenzana, inhau dzakaringana. Usakundikana, usanyanyisa. ” Tevedza dhizaini dhizaini yekucheka pane kuomarara uye kurerutsa. Mune yakaderera toni toni inopesana nerubhabhatidzo rwenguva, kuwedzeredzwa kwekutsvaga kwemazano ako pachako kunova hwaro hwekugadzira nzvimbo. Kuburikidza nekubatana kwemaonero, intuition uye maitiro ekuziva, iyo nyaya inopfuura nzvimbo inowedzerwa. Iyo inobvumidza iyo muoni kuona akasiyana akasiyana mamanzwiro uye manzwiro. Zvinoita sekunge makakatanwa enhetembo yacho haasi kuda kuburitswa pamusoro, yakavanzwa pasi pezasi penhetembo.
Manzwiro enzvimbo yacho ndeechokwadi, kwete akashandurwa, asi akatorwa kubva mukuvapo kwekunyudza kuona.
Zita rePurojekiti: Central Monument Kushambadzira Center
Kero yeProjekti: Mharadzano yeFutong Road uye Qinghong Road, Fuqing Guta
Dhizaini yenzvimbo: 1000 mativi metres
Nguva yekugadzira: Gunyana 2020
Nguva yekupedzisa: Kukadzi 2021
Muridzi weProjekiti: Jinhui Boka reSouth China Dunhu
Mutungamiriri: Peng Gang, Lin Xiule, Jia Dawei, Liu Huan, Lin Jincheng
Yakaomarara fanika dhizaini: Shenzhen Dikai Yemukati Dhizaini Co
Dhizaini Yekugadzira: Xu Shuren, Nie Qingqing, Zhuang Xianggao, Li Jinnian, Chen Chaoqun
Runyoro rwekugadzira dhizaini: Matrix Vertical Dhizaini Dhizaini
Purojekiti Photographer: Yan Ming
Pakapfuura :: Marble + Wood Grille, Kugadzira Runako rweRhythm | Zero Square Dhizaini Zvadaro: 120㎡Nzvimbo Yemazuva Ano, Nzvimbo Inogadzikana Pasi Peiyo Yakanyanya-Kuwanda Hupenyu | Hongfu Gauge Dhizaini